Ulapha: ekhaya - Izindaba
IVietnam ingumthengisi wesibili ngobukhulu emhlabeni wezingubo nezingubo ngemuva kweChina. IVietnam idlule iBangladesh, futhi izobekwa endaweni yesibili ezimakethe zomhlaba jikelele zokukhiqiza izembatho nezingubo engxenyeni yokuqala ka-2020. (Ukuhlelwa kweProNewsReport): - UThanh Pho Ho Chi Minh, Okthoba 2, 202 ...
Akunandaba ukuthi imfundamakhwela noma ikhasimende elijwayelekile elenziwe ngezifiso izikhathi eziningi, kuzothatha umzamo othile ukukhetha indwangu. Ngisho nangemva kokukhetha ngokucophelela nokuzimisela, kuhlale kunokungaqiniseki okuthile. Nazi izizathu eziyinhloko: Okokuqala, kunzima uku ...
Khohlwa yihhovisi, abesifazane manje bathenga izingubo zokugqoka
Kuleli hlobo nasekwindla, ngaphambi kokuba abesifazane babuyele ehhovisi, babonakala bethenga izimpahla futhi beyozijabulisa futhi. Izingubo ezivamile, iziqongo ezinhle, zesifazane namajezi, ama-jean aqhakazile namajini aqondile, nezikhindi bekudayisa kahle ezitolo ezithengisa. Yize izinkampani eziningi zikhona ...
Inyunyana ithi, iyunifomu entsha yabasebenzi bezindiza iAmerican Airlines idala isifuba.
Njengoba sonke sazi, ukuhamba emoyeni kwakungokuhlangenwe nakho okuthakazelisa kakhulu esikhathini saso sosuku-ngisho nesikhathi samanje sezindiza ezindiza kakhulu nezihlalo zezomnotho, abaklami abaphezulu basavame ukuphakamisa izandla zabo ukwakha imifaniswano yakamuva yabasebenza ezindizeni. Ngakho-ke, ngenkathi iAmerican Airlines yethula imifaniswano emisha ...
Imfashini ishesha kanjani ibhubhisa imvelo
Ukuthola uxhaso lomphakathi kusinikeza ithuba elikhulu lokuqhubeka nokukunikeza okuqukethwe kwekhwalithi ephezulu. Sicela usisekele! Ukuthola uxhaso lomphakathi kusinikeza ithuba elikhulu lokuqhubeka nokukunikeza okuqukethwe kwekhwalithi ephezulu. Sicela usisekele! Njengoba abathengi bethenga izingubo eziningi, ...
Ucwaningo lukhombisa ukuthi i-coronavirus ingaphila kumifaniswano yezokwelapha izinsuku ezintathu
Ososayensi baseDe Montfort University (i-DMU) eLeicester baxwayisa ngokuthi igciwane elifana nengcindezi ebangela iCovid-19 lingaphila ezingutsheni futhi lisabalale kwezinye izindawo kuze kube amahora angama-72. Ocwaningweni oluhlola ukuthi i-coronavirus iziphatha kanjani ezinhlotsheni ezintathu zezindwangu ezivame ukusetshenziswa ku-healthcar ...